Premier Bank: Baan ku shaqeeya nidaamka bangiyada Islaamiga ah oo Somaliland ka hawl-galay | Allsomaliland
“Premier Bank waa bangi Somaliland laga leeyahay oo ku shaqeeya hannaanka bunuugta Islaamiga ah ee aan ribawiga ahayn, soona kordhiyey adeegyo casri ah oo maqnaa, shareecada Islaamkana waafaqsan”.Waxa arrintaas diirka ka qaaday guddoomiyaha Premier Bank, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil (Musaabaqo), oo furayey kulan afur ah oo ka dhacay Ambassador Hotel Hargeysa, Salaasadii 13.06.2017.
• Maalingelin loogu talo galay dadka leh ganacsiga yaryar ee soo koraya.
• Xisaabaad kaydsan iyo kuwa socda ama furan ee ganacsiga iyo shakhsiyaadkaba, lehna macaamil heer caalami ah oo Islaami ah.
• Adeegyada casriga ah ee MasterCard iyo Visa oo ah adeegyo maqnaa oo Premier Bank markii ugu horraysey Somaliland ka hirgeliyey.
• SWIFT oo ah hannaan fududeeya in lacagaha la isugu diro baananka.
Prof Mubaarik Ibraahim Aar oo ah hormuudka jaamacadda Beder, daadihiyana barnaamijka “Macallinka TV-ga” eeka baxa TV-ga Qaranka Somaliland oo isna ka hadlay munaasibaddaas, ayaa sheegay in Premier Bank noqday bangigii ugu horreeyey ee taageero dhaqaale u fidiya dhallinyarada ka baxaysa shan jaamacadood oo Somaliland ah, gaar haan kulliyadaha dhaqaalaha iyo ganacsiga oo ku tartamaya sidii ay u abuuri lahaayeenganacsi madaxbannaan oo ay yeeshaan marka ay waxbarashada dhammaystaan. Arrintaas oo muujinaysa sida Premier Bank ugu heellan yahay in uu ka qayb qaato dhiirrigelinta koboca dhaqaalaha dalka iyo shaqo-abuurka da’ yarta.